Blame · po/my.po · 2fe6b205f2a06587d1a6214c1e1a072a288bc26f · GNOME / GIMP · GitLab
Added Burmese (Myanmar) translation
Russell Kyaw committed Jan 29, 2010
# Burmese translation of gimp.
# Copyright © 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Russell Kyaw <rkyaw@yahoo.com>, 2009, 2010.
# BurmaIT Team <burmait@burmait.net>, 2009, 2010.
"Project-Id-Version: gimp 2.7\_n"
Updated Burmese translation for GIMP
Russell Kyaw committed Mar 18, 2010
"POT-Creation-Date: 2010-03-18 01:17+0200\_n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 17:16+0200\_n"
"Last-Translator: Russell Kyaw <rkyaw@yahoo.com>\_n"
"Language-Team: Burmese <burmait@burmait.net>\_n"
#: ../app/about.h:26 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgstr "GNU ရုပ်ပုံ စီမံကိုင်တွယ်ရေး ပရိုဂရမ်"
"Copyright © 1995-2009\_n"
"မူပိုင်ခွင့် © ၁၉၉၅-၂၀၀၉\_n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis နှင့် GIMP တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့"
"Foundation; either version3of the License, or (at your option) any later "
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"GIMP.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
"GIMP ဟာ အခမဲ့ ဆော့ဗ်ဝဲ ဖြစ်တယ် - ၄င်းကို GNU ခေါ် အထွေထွေ လူထု သင် ပြန်လည် "
"ဖြန့်ဖြူနိုင်ပြီး/(သို့) ပြုပြင်နိုင်တယ်။ or modify it under the terms of the GNU "
"General Public License as published by the Free Software Foundation; either "
"version3of the License, or (at your option) any later version.\_n"
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \_"%s\_")."
"စမ်းသပ်တဲ့ swap ဖိုင်တခုကို မဖွင့်နိုင်ဘူး။\_n"
" အချက်အလက်ကြမ်း ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားဖို့၊ သင့်ရဲ့ ဦး​စားပေးချက်များ (လောလောဆယ် \_"%s"
"\_") ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ swap ဖိုင်တွဲရဲ့ တည်နေရာနဲ့ ခွင့်ပြုချက်များကို စစ်ဆေးပါ။"
msgstr "စံထားချက် '%s' ကို သုံးစွဲတဲ့ လုပ်ငန်း စကား​ပြန်သူကို မသတ်မှတ်ထားဘူး။\_n"
#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
msgstr "လုပ်ငန်း စကားပြန် '%s' မရနိုင်ဘူး။ လုပ်ငန်း စနစ် ပိတ်ထားတယ်။"
#: ../app/main.c:135 ../tools/gimp-remote.c:59
msgstr "မူအဆင့် အချက်အလက်ကို ပြသပြီး ထွက်ခွာပါ"
msgstr "ခွင့်ပြုချက် အချက်အလက်ကို ပြသပြီး ထွက်ခွာပါ"
msgstr "ပိုမို ရှည်လျားစေပါ"
msgid "Startanew GIMP instance"
msgstr "GIMP ယန္တရား အသစ်တခုကို စတင်ပါ"
msgid "Open images as new"
msgstr "ရုပ်ပုံများကို အသစ်အတိုင်းနဲ့ ဖွင့်ပါ"
msgstr "သုံးစွဲသူ ကြားခံမြင်ကွင်း တခု မပါပဲ ​မောင်းနှင်ပါ"
msgstr "စုတ်တံများ၊ ရောင်စဉ်တန်းများ၊ နမူနာပုံစံများ... စသည်များကို မဖွင့်နဲ့။"
msgstr "ဖောင့်များကို မဖွင့်ပါနဲ့"
msgstr "အစပြုတဲ့ ၀င်းဒိုးတခုကို မပြနဲ့"
msgstr "GIMP နဲ့ ယန္တရားငယ်များ အကြား မှတ်ဉာဏ် မျှဝေချက်ကို မသုံးစွဲပါနဲ့။"
msgstr "အထူး CPU အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို မသုံစွဲပါနဲ့"
msgstr "အခြား sessionrc ဖိုင်တခုကို သုံးစွဲပါ"
msgstr "အခြား သုံးစွဲသူ gimprc ဖိုင်တခုကို သုံးစွဲပါ"
msgstr "အခြား နည်းစနစ် gimprc ဖိုင်တခုကို သုံးစွဲပါ"
msgstr "မောင်းနှင်ရန် လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားချက် (အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သုံးစွဲနိုင်တယ်)"
msgstr "လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ လုပ်ဆောင်မဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်"
msgstr "သတင်းတိုများကို အညွှန်း စာမျက်နာ တခု မသုံးစွဲပဲ console ဆီ ပေးပို့ပါ"
msgstr "PDB လိုက်ဖက်မှု စနစ် (အပိတ်|အဖွင့်|သတိပေးချက်)"
"Debug in case ofacrash (never|query|always)ပျက်စီးမှု တခုခု ဖြစ်ချိန်မှာ "
msgstr "ဆိုးရွားမှု မဟုတ်တဲ့ ဖြေရှင်းရေး အ​ချက်ပေး အထိန်းများကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "သတိပေးချက်များ အားလုံးကို ဆိုးရွားမှုပုံစံ ပြုလုပ်ပါ"
msgstr "Gimprc ဖိုင်တခုကို စံထားချက် ခင်းကျင်းမှုများနဲ့ ထွက်ပေါ်စေပါ"
"GIMP က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံစွဲသူ ကြားခံမြင်ကွင်းကို မစတင်နိုင်ဘူး။\_n"
"သင့်ရဲ့ တည်ရှိတဲ့ ပြသမှု ၀န်းကျင်အတွက် သင့်လျှော်တဲ့ တပ်ဆင်မှု တခုကို အသေအချာ ပြုလုပ်ပါ။"
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "အခြား GIMP ယန္တရားကို လည်ပတ်ထားပြီး။"
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "GIMP ရလဒ်။ ဒီ၀င်းဒိုးကို ပိတ်ဖို့ အက္ခရာ တခုခုကို ရိုက်ထည့်ပါ။"
msgid "(Type any character to close this window)\_n"
msgstr "(ဒီ၀င်းဒိုးကို ပိတ်ဖို့ အက္ခရာ တခုခုကို ရိုက်ထည့်ပါ)\_n"
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "GIMP ရလဒ်။ ဒီ၀င်းဒိုးကို သင် ခေါက်ထားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၄င်းကို မပိတ်ပါနဲ့။"
"စီစဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဖိုင်အမည် စာဝှက်ရေးသားမှုကို UTF-8: %s အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလို့ မရဘူး။\_n"
"ပတ်၀န်းကျင် ကိန်းရှင် G_FILENAME_ENCODING ကို စစ်ဆေးပါ။"
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\_n"
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"GIMP သုံးစွဲသူ ပြုပြင်ဖန်တီးမှုကို ထိန်းထားတဲ့ ဖိုင်တွဲအမည်ကို UTF-8 အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလို့ "
#. show versions of libraries used by GIMP
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "%s မူအဆင့် %s သုံးစွဲမှု (%s မူအဆင့်နဲ့ မတူပဲ ရေးသားပြုစုထားတယ်။)"
#: ../app/version.c:126 ../tools/gimp-remote.c:94
msgstr "%s မူအဆင့် %s"
#: ../app/actions/actions.c:107 ../app/dialogs/dialogs.c:351
msgstr "စုတ်တံ တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/core/gimp.c:920
#: ../app/dialogs/dialogs.c:282 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2720
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/dialogs/dialogs.c:292
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:309
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/actions/actions.c:128 ../app/dialogs/dialogs.c:275
msgstr "ညွှန်တံ အချက်အလက်"
#: ../app/actions/actions.c:143 ../app/dialogs/dialogs.c:294
msgstr "စာတမ်း မှတ်တမ်း"
#. Some things do not have grids, so just list
#: ../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:300
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "တက်ကြွတဲ့ စုတ်တံ"
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:355
msgid "Paint Dynamics Editor"
msgstr "ရောင်စဉ်တန်း တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/dialogs/dialogs.c:271
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ခုံ"
#: ../app/actions/actions.c:164 ../app/dialogs/dialogs.c:290
#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:359
#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/core/gimp.c:936
#: ../app/dialogs/dialogs.c:286 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/dialogs/dialogs.c:280
#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/dialogs.c:305
#: ../app/actions/actions.c:185 ../app/dialogs/dialogs.c:363
msgstr "အရောင်စပ်ဆေးခွက် တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:932
#: ../app/dialogs/dialogs.c:288 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/core/gimp.c:928
#: ../app/dialogs/dialogs.c:284 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/core/gimpchannel.c:369
msgstr "အမြန် မျက်နှာဖုံး"
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/dialogs/dialogs.c:333
msgstr "နမူနာ အမှတ်များ"
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/core/gimp.c:945
msgstr "စာသား ကိရိယာ"
msgstr "စာသား တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
#: ../app/actions/actions.c:215 ../app/dialogs/dialogs.c:263
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854 ../app/gui/gui.c:430
msgstr "ကိရိယာ ရွေးစရာများ"
#: ../app/actions/actions.c:221 ../app/dialogs/dialogs.c:313
#. value description and new value shown in the status bar
msgid "%s: %.2f"
msgstr "%s: %.2f"
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
msgid "%s: %d"
msgstr "%s: %d"
msgstr "စုတ်တံများ စာရင်းမှတ်"
msgstr "စုတ်တံကို ရုပ်ပုံလို ဖွင့်ပါ"
msgid "Createanew brush"
msgstr "စုတ်တံအသစ် ဖန်တီးပါ"
msgstr "စုတ်တံကို ပုံတူပွားပါ"
msgid "Duplicate this brush"
msgstr "စုတ်တံ တည်နေရာကို မိတ္တူကူးပါ"
msgstr "စုတ်တံဖိုင် တည်နေရာကို clipboard ဆီ မိတ္တူကူးပါ"
msgstr "စုတ်တံကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgid "Delete this brush"
msgstr "ဒီစုတ်တံကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgstr "စုတ်တံများကို ပြန်နှိုးပါ"
msgstr "စုတ်တံကို တည်းဖြတ်ပါ..."
msgid "Edit this brush"
msgstr "ဒီစုတ်တံကို တည်းဖြတ်ပါ"
msgstr "ဘာဖာများ စာရင်းမှတ်"
msgstr "ဘာဖာကို ပွားယူပါ"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ဘာဖာကို ပွားယူပါ"
msgstr "ဘာဖာထဲကို ပွားယူပါ"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ဘာဖာကို ရွေးချယ်ချက်ထဲ ပွားယူပါ"
msgstr "ဘာဖာကို အသစ်လို ပွားယူပါ"
msgid "Paste the selected buffer asanew image"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ဘာဖာကို ရုပ်ပုံသစ်တခု အဖြင့် ပွားယူပါ"
msgstr "ဘာဖာကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ဘာဖာကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgstr "ချာနယ်များ စာရင်းမှတ်"
msgstr "ချာနယ် အရည်အသွေးများကို တည်းဖြတ်ပါ..."
msgstr "ချာနယ်အမည်၊ အရောင်နဲ့ အလင်းပိတ်မှုကို တည်းဖြတ်ပါ"
msgstr "ချာနယ်အသစ် တခု ဖန်တီးပါ"
msgstr "နောက်ဆုံး သုံးစွဲတဲ့ တန်ဖိုးများနဲ့ ချာနယ်အသစ် တခုကို ဖန်တီးပါ"
msgstr "ချာနယ်များကို ပုံတူပွားပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်အတွက် ပုံတူပွားမှုတခု ဖန်တီးပြီး ၄င်းကို ရုပ်ပုံထဲမှာ ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "ချာနယ်ကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgstr "ချာနယ်ကို မြှင့်တင်ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို လှိုင်း ဆင့်စီချက်ထဲမှာ အဆင့်တခု မြှင့်တင်ပါ"
msgstr "ချာနယ်ကို ထိပ်ဖက် မြှင့်တင်ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို လှိုင်း ဆင့်စီချက်ရဲ့ ထိပ်ဖက်ကို မြှင့်တင်ပါ"
msgstr "ချာနယ်ကို လျှော့ချပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို ချာနယ် ဆင့်စီချက်ထဲမှာ အဆင့်တခု လျှော့ချပါ"
msgstr "ချာနယ်ကို အောက်ခြေကို လျှော့ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို ချာနယ် ဆင့်စီချက်ရဲ့ အောက်ခြေကို လျှော့ချပါ"
msgstr "ရွေးချယ်မှု ချာနယ်"
msgstr "ရွေးချယ်ချက်ကို ဒီချာနယ်နဲ့ အစားထိုးပါ"
msgstr "ရွေးချယ်ချက်ထဲ ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို လက်ရှိ ရွေးချယ်ချက်ဆီ ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "ရွေးချယ်ချက်ထဲမှ နှုတ်ယူပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို လက်ရှိ ရွေးချယ်ချက်ထဲမှ နှုတ်ယူပါ"
msgstr "ရွေးချယ်ချက်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်ပါ"
msgstr "ဒီချာနယ်ကို လက်ရှိ ရွေးချယ်ချက်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်ပါ"
msgstr "ချာနယ် အရည်အသွေးများ​"
msgstr "ချာနယ် အရည်အသွေးများ​ကို တည်းဖြတ်ပါ"
msgstr "ချာနယ် အရောင်များ​ကို တည်းဖြတ်ပါ"
msgstr "အလင်းပိတ်မှုကို ဖြည့်ပါ -"
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:263
msgstr "ချာနယ် အသစ်"
msgstr "ချာနယ် အသစ် ရွေးစရာများ"
msgstr "ချာနယ် အသစ် အရောင်"
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:180
msgstr "%s ချာနယ် မိတ္တူ"
#: ../app/actions/channels-commands.c:315 ../app/core/gimpselection.c:583
#: ../app/pdb/selection-cmds.c:454 ../app/pdb/selection-cmds.c:521
752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
msgstr "အရောင်ဇယား စာရင်းမှတ်"
msgstr "အရောင်ကို တည်းဖြတ်ပါ..."
msgid "Edit this color"
msgstr "ဒီအရောင်ကို တည်း​ဖြတ်ပါ"
msgstr "FG မှ အရောင်ကို ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "လက်ရှိ အနီးမြင်ကွင်း အရောင်ကို ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "လက်ရှိ နောက်ခံ အရောင်ကို ပေါင်းထည့်ပါ"
msgstr "အရောင်ဇယား ရေးသွင်းချက် #%d ကို တည်း​ဖြတ်ပါ"
msgstr "အရောင်ဇယား ရေးသွင်းချက်ကို တည်း​ဖြတ်ပါ"
msgid "Use _GEGL"
msgstr "_GEGL ကို သုံးစွဲပါ"
msgid "If possible, use GEGL for image processing"
msgstr "ဖြစ်နိုင်ရင်၊ GEGL ကို ရုပ်ပုံ စီမံပြုပြင်ရေးအတွက် သုံးစွဲပါ"
msgstr "ရေးဆွဲမှု စနစ်"
msgstr "အရောင်စပ် ဆေးခွက်"
msgstr "ပုံပန်း အချိုး"
msgstr "စံထားချက် အရောင်များ"
msgstr "အနီးမြင်ကွင်း အရောင်ကို အနက်ရောင်၊ နောက်ခံအရောင်ကို အဖြူရောင် သတ်မှတ်ပါ"
msgstr "Swap အရောင်များ"
msgstr "အနီးကပ်မြင်ကွင်းနဲ့ နောက်ခံ အရောင်များကို ဖလှယ်ပါ"
msgid "Paint Mode: %s"
msgstr "ရေးဆွဲမှု စနစ် - %s"
msgid "Brush Shape: %s"
msgstr "စုတ်တံ ပုံသဏ္ဍာန် - %s"
msgid "Brush Radius: %2.2f"
msgstr "စုတ်တံ အချင်း၀က် - %2.2f"
925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
msgid "Brush Angle: %2.2f"
msgstr "စုတ်တံရဲ့ ထောင့် - %2.2f"
msgstr "ညွှန်တံ အချက်အလက် စာရင်းမှတ်"
msgstr "နမူနာ ပေါင်းစပ်မှု"
msgid "Use the composite color of all visible layers"
msgstr "မြင်နိုင်တဲ့ အလွှာများ အားလုံးရဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့ အရောင်ကို သုံးစွဲပါ"
#: ../app/actions/data-commands.c:104 ../app/actions/documents-commands.c:343
#: ../app/actions/file-commands.c:193 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:221
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:768 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:178
"'%s' ကို ဖွင့်ဖို့ မအောင်မြင်ဘူး -\_n"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:124 ../app/core/gimpimage.c:1522
#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:222
#: ../app/core/gimppalette.c:377 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
msgstr "အရာ၀တ္ထုကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgid "Delete '%s'?"
msgstr "'%s' ကို ပယ်ဖျက်မလား။"
"Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
"'%s' ကို စာရင်းထဲမှ ဖယ်ရှားပြီး ၄င်းကို ဓါတ်ပြားပေါ်မှာ ပယ်ဖျက်ဖို့ သင် တကယ် "
msgid "Open the tool options dialog"
msgstr "ကိရိယာ ရွေးစရာများ အညွန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "ကိရိယာ အနေအထား"
msgid "Open the device status dialog"
msgstr "ကိရိယာ အနေအထား အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the layers dialog"
msgstr "အလွှာများ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the channels dialog"
msgstr "ချာနယ်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the paths dialog"
msgstr "လမ်းကြောင်းများ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the colormap dialog"
msgstr "အရောင်ဇယား အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the histogram dialog"
msgstr "ဟီစတိုဂရမ် အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "ရွေးချယ်ချက် တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
msgid "Open the selection editor"
msgstr "ရွေးချယ်ချက် တည်းဖြတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the display navigation dialog"
msgstr "ပြသမှု ကူးသန်းကြည့်ရှုခြင်း အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Undo _History"
msgstr "မှတ်တမ်းကို ပြန်ဖြည်ပါ"
msgid "Open the undo history dialog"
msgstr "မှတ်တမ် ပြန်ဖြည်ပေးတဲ့ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the pointer information dialog"
msgstr "ညွှန်တံ အချက်အလက် အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "_Sample Points"
msgid "Open the sample points dialog"
msgstr "နမူနာ အမှတ်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the FG/BG color dialog"
msgstr "FG/BG အရောင် အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the brushes dialog"
msgstr "စုတ်တံ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the brush editor"
msgstr "စုတ်တံ တည်းဖြတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open paint dynamics dialog"
msgid "Open the paint dynamics editor"
msgstr "ရောင်စဉ်တန်း တည်းဖြတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the patterns dialog"
msgstr "နမူနာပုံစံများ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the gradients dialog"
msgstr "ရောင်စဉ်တန်းများ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the gradient editor"
msgid "Open the palettes dialog"
msgstr "အရောင်စပ်ဆေးခွက်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "အရောင်စပ်ဆေးခွက်များ တည်းဖြတ်ကိရိယာ"
msgid "Open the palette editor"
msgstr "အရောင်စပ်ဆေးခွက်များ တည်းဖြတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the fonts dialog"
msgstr "ဖောင့်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the named buffers dialog"
msgstr "အမည်ပေးထားတဲ့ ဘာဖာများ အညွှန်းစာမျက်နှာ ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the images dialog"
msgstr "ရုပ်ပုံများ အညွှန်းစာမျက်နှာ ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the document history dialog"
msgstr "စာတမ်း မှတ်တမ်း အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the image templates dialog"
msgstr "ရုပ်ပုံ ပုံစံခွက်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the error console"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ခုံကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the preferences dialog"
msgstr "ဦးစာပေးချက်များ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "_Input Devices"
msgstr "ထည့်သွင်းမှု ကိရိယာများ"
msgid "Open the input devices editor"
msgstr "ကီး​ဘုတ် ဖြတ်လမ်းများ"
msgid "Open the keyboard shortcuts editor"
msgstr "ကီးဘုတ် ဖြတ်လမ်းများ တည်းဖြတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open the module manager dialog"
msgstr "အစိတ်အပိုင်း မန်နေဂျာ အညွန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "​တနေ့တာ သိကောင်းစရာ"
msgid "Show some helpful tips on using GIMP"
msgstr "GIMP သုံးစွဲခြင်း အထောက်အကူပြု သိကောင်းစရာများ အချို့ကို ဖေါ်ပြပါ"
msgstr "GIMP အကြောင်း"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943 ../app/widgets/gimptoolbox.c:774
msgid "Raise the toolbox"
msgstr "ကိရိယာအိတ်ကို မြှင့်တင်ပါ"
msgid "New Toolbox"
msgid "Createanew toolbox"
msgid "M_ove to Screen"
msgstr "မျက်နှာပြင်ဆီ ရွှေ့ပါ"
msgid "Close Dock"
msgstr "ရပ်နားနေရာကို ပိတ်ပါ"
msgid "_Open Display..."
msgstr "ပြသ​မှုကို ဖွင့်ပါ..."
msgid "Connect to another display"
msgstr "တခြား ပြသမှုဆီ ချိတ်ဆက်ပါ"
msgid "_Show Image Selection"
msgstr "ရုပ်ပုံ ရွေးချယ်ချက်ကို ဖေါ်ပြပါ"
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420